Mayelana neNkqubo yeNkxaso yeNkxaso yoKhuseleko - iSSI
Ukunceda abakhulileyo kunye abakhubazekileyo ukuba bahlangabezane neemfuno eziziSeko
Imali yeNkxaso yoKhuseleko (Supplemental Security Income) (SSI) yinkqubo karhulumente yenzuzo yokubonelela ngenkokhelo ukuhlangabezana neemfuno ezisisiseko zokutya, izambatho, kunye nendawo yokukhusela kubantu abangaboniyo okanye abakhubazekileyo kunye nabanomvuzo omncinci.
Iintlawulo zeenyanga ze-SSI zihlawulelwa kubantu abanomvuzo ongenamkelo kunye nezibonelelo ezikhubazekileyo, iimfama, okanye iminyaka yobudala engama-65 okanye ngaphezulu. Abantwana abayizifama okanye abakhubazekileyo, kunye nabantu abadala, banakho ukufumana ilungelo lokufumana i-SSI inzuzo.
Indlela i-SSI eyahlukileyo ngayo kwi-Benetirement Benefits
Nangona inkqubo ye-SSI ilawulwa yiNtlawulo yoKhuseleko loLuntu, indlela i-SSI incediswa ngayo ihluke kakhulu kwiindlela zokuncedisa umhlala-phantsi weNtlalo .
Iintlawulo ze-SSI azidingi kwaye azixhomekeke kumsebenzi wangaphambili wangommkeli okanye umsebenzi wangaphambili wentsapho. Ngamanye amazwi, akukho msebenzi okhoyo okanye owangaphambili ofunekayo ukuze afanelekele i-SSI inzuzo.
Ngokungafani neenzuzo zeNtlalo, i- SSI inzuzo ixhaswa ngemali ngokubanzi evela kwi-Treasury yase-US eyenziwe ngerhafu yerhafu ehlawulwa ibe ngabanye kunye namashishini. Iintlawulo zoKhuseleko lwezeNtlalo ezigcinwe kwii-paychecks zabasebenzi phantsi komthetho we-Federal Insurance Contributions Act (FICA) abancedisi ukuxhasa iprogram ye-SSI. Imali eyi-SSI yenkxaso-mali, kunye neemali eziphezulu zenyanga ezihlawulwa kubamkeli be-SSI, zibekwa rhoqo yiCongress njengenxalenye yenkqubo yohlahlo lwabiwo-mali .
Abamkeli be-SSI kwiinkoliso ezininzi banako ukufumana izibonelelo zabo ezixhaswa yiMedicaid ukunceda ukuhlawula iibhilikhwe zonyango, imiqathango kunye nezinye iindleko zonyango.
Abaxhamli be-SSI banakho ukufumana izitampu zokutya kuwo wonke amazwe ngaphandle kweCalifornia. Kwamanye amazwe, isicelo seenzuzo ze-SSI sinokusebenza njengesitampu zokutya.
Ngubani ovumelekileyo kwi-SSI Benefits
Nabani na o
ubudala (abaneminyaka engama-65 okanye ngaphezulu);
yimfama okanye ikhubazekile.
Yaye ngubani na
engenayo imali; kwaye
unciphise ubuncwane; kwaye
ngummi wase-US okanye wesizwe, okanye kwelinye leendidi ezithile zabafokazi; kwaye
ayikho kwilizwe ngeenyanga ezipheleleyo zekhalenda okanye kwiintsuku ezilandelelanayo ezingama-30 okanye ngaphezulu; kwaye
akagcinwanga kwiziko (njengesibhedlele okanye ijele) kwiindleko zikaRhulumente; kwaye
iyakwenza nayiphi na enye inzuzo yemali okanye iintlawulo apho angafaneleka khona (umzekelo, ipensheni, iiNtlawulo zeNtlalo); kwaye
unikeza imvume ye-SSA ukunxibelelana nayiphi na isikhungo sezimali kwaye ucele nayiphi na iirekhodi zemali malunga nawe; kwaye
fayile isicelo; kwaye
idibana nezinye iimfuno.
Yintoni 'engenayo imali engenayo' kuquka?
Ngeenjongo zokumisela ukufaneleka kwe-SSI, ukhuseleko lwezeNtlalo lubandakanya oku kulandelayo ngenzuzo:
imali oyifumanayo emsebenzini;
imali oyifumanayo kwiminye imithombo, njengeeNtlawulo zeNtlalo, inzuzo yemisebenzi, inzuzo yokungabikho kwemisebenzi, iSebe leeMantshi, izihlobo okanye izalamane; kwaye
ukutya kokutya okanye indawo yokuhlala.
Ziziphi 'Iimithombo EziNcinci'?
Ngeenjongo zokumisela ukufaneleka kwe-SSI, ukhuseleko lwezeNtlalo lubala oku kulandelelwanisiweyo:
akhawunti yebhanki, amasheya, izibophelelo zokugcinwa kwe-US;
inshorensi yobomi; kwaye
nayiphi na into onayo eyayiya kuguqulwa ibe yimali kwaye isetyenziswe ukutya okanye indawo yokukhusela.
QAPHELA: Ukufumana iinkcukacha ezipheleleyo kwiprogram ye-SSI, kubandakanywa iziqinisekiso kunye nendlela yokufaka izicelo, jonga ikhasi lekhaya leNkxaso yeNgcaciso yeNkcazo kwi-website ye-SSA.
Iinkcukacha zeNtlawulo zeSSI
Iintlawulo zeentlawulo zentlawulo ye-SSI zibekwa minyaka yonke yiCongress kwaye zilungiswa rhoqo ngeJanuwari ukuze zibonise indleko zokuphila. Inani lokuhlawula i-Maximum (SSI) likhuphuka kunye nokunyuka kweendleko zokuhlala (i-COLA) ezisebenza kwiintlawulo zomhlala-phantsi zeNtlalo.
Ngo-2016, kwakungenayo i-COLA yeeNtlalontle zentlalo yomhlala-phantsi, ngoko ke kwakungekho nyuka kwiimali zokuhlawula i-SSI ngo-2016. Inani elipheleleyo leenyanga yokuhlawula i-SSI ngo-2016 laliyi-733 yemali yokufumana umntu ofanelekileyo kunye ne-$ 1,100 ukuze umntu ofanelekileyo afumane iqabane elifanelekileyo.
Ezinye iindawo zibonelela ngezibonelelo ze-SSI ezongezelelweyo.
Iintlawulo zenzuzo ze-SSI azihlawulwanga.
Inani elixhamliweyo lemali ehlawulwa ngabanikeli ngabanye be-SSI ingaba ngaphantsi kobuninzi kuxhomekeka kwingeniso engekho ye-SSI, njengemvuzo kunye nezinye iintlawulo zeNtlalo. Abantu abahlala ekhayeni labo, kwikhaya lomnye umntu, okanye kwikhaya lokunakekela abahlengikazi elivunyiweyo leMedicaid banakho ukuhlaziywa kwee-SSI ngokunjalo.
Imali yenyanga iyancitshiswa ngokukhupha imali engenayo yenyanga. Kwimeko yomntu ofanelekileyo kunye nomlingane ofanelekileyo, imali ehlawulwayo iyahlukana ngokulinganayo phakathi kwabafazi ababini.
Ukuhlaziywa kwamanqanaba angoku aphezulu kunye nesilinganiso semali yokuhlawula i-SSI kufumaneka kwiwebhusayithi yeSS Statistics Statistics.
Ukufumana iinkcukacha ezipheleleyo kwiNkqubo ye-SSI
Iinkcukacha ezipheleleyo kuzo zonke iinkalo zeprogram ye-SSI ziyafumaneka kwi-Social Security - Ukuqonda isibonelelo se-Intanethi yeNkxaso yoKhuseleko.
I-Bowling University State GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Isona seSisiseko esisisiseko seMicimbi: iAtom
Ukuprintwa ukuNceda ngeNomboro kunye nokuBala iNgqiqo
Ukusebenzisa iSpanish Preposition 'Desde'
I-Glossary ye-Zoology Terms